Nampahafantatra tolotra maro amin’ny fandraharahana sy fampisamboram-bola mantsy ny fanjakana Korea Atsimo tamin’ny alalan’ny Ambasadaorony miasa sy monina eto Madagasikara omaly alarobia 14 novambra tetsy amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina. Maro ireo sehatra azo iaraha-miasa tahaka ny Indostria, ny angovo eny fa na ny fambolena aza. Nanambara ny tale jeneralin’ny fampiroboroboana ny sehatra Indostria, Ramindo Gaetan fa afaka mandray anjara amin’ireo tolotra ireo i Madagasikara ary manantena hatrany ny fitohizan’ny fiaraha-miasa amin’i Korea Atsimo. Hitondra vokatra tsara amin’ny fampiroboroboana sy fampivoarana ny sehatra Indostria sy ny tsy miankina ny fandraharahana atao amin’izany satria tena mitodika amin’ny fampivelarana sy fampandrosoana izany sehatra izany ny ankamaroan’ny tolotra. Ilaina hatrany ny fiaraha-miasan’ny fanjakana sy tsy miankina amin’ny sehatra sahala amin’izao mba hiteraka fampandrosoana ara-toekarena haingana amin’ny alalan’ireo paikady maro iaraha-misalahy. Mila maka lesona hatrany amin’ny tantaran’i Korea i Madagasikara satria firenena tena efa potiky ny ady izy kanefa nisondrotra ary lasa manankarena noho ny finiavana sy ny fitiavan-tanindrazana nananan’ny vahoaka koreana. Eo anoloan’izao toe-draharaha mafana mahakasika ny fiandrasana ny voka-pifidianana izao dia mirary fitoniana hatrany izy ireo.